Ahoana ny fisafidianana mpanome tolotra mailaka | Martech Zone
Ahoana ny fomba hisafidianana mpamatsy tolotra mailaka
Alakamisy, Septambra 10, 2015 Douglas Karr
Tamin'ity herinandro ity aho dia nihaona tamin'ny orinasa iray izay mieritreritra ny handao ny mpanome tolotra mailaka azy ireo ary hanangana ny rafitry ny mailaka ao anatiny. Raha nanontany ahy ianao folo taona lasa izay raha hevitra tsara izany dia nilaza aho fa tsia. Na izany aza, niova ny fotoana, ary ny teknolojia an'ny ESP dia mora ampiharina raha fantatrao izay ataonao. Izany no antony namolavolantsika CircuPress.
Inona no niova tamin'ny mpanome tolotra mailaka?
Ny fiovana lehibe indrindra tamin'ny ESP dia ny fahaterahana. Raha ny marina dia tsy ireo ESPs no niova fa ny ISP. Ireo matihanina momba ny fandefasana mailaka ao amin'ny ESP lehibe dia nifandray mivantana tamin'ny mpamatsy tolotra Internet mba hamahana olana sy hiantohana ny fahaterahana tsara. Rehefa nandeha ny fotoana, na izany aza, ireo ISP dia nanidy ireo birao ireo ary nitodika tany amin'ny algorithma hanaraha-maso ny lazan'ny mpandefa, handinihana ny atiny, hanakanana na hanaiky mailaka, ary hampiditra azy ireo ao anaty lahatahiry SPAM na ny boaty.
Ataovy ao an-tsaina fa ny fanaterana dia TSY midika hidiranao anaty boaty! 100% ny mailakao dia mety ho any amin'ny Junk Folder, ary mitovy amin'ny fanaterana 100% izany. Na mampiasa ESP ianao na tsia dia tsy manome anao vintana tsara kokoa hahatongavana amin'ny boaty raha fantatrao izay ataonao. Mampiasa izahay 250ok hanaraha-maso ny fametrahana inbox anay sy laza.
Misy toetra malina izay Mpamatsy tolotra mailaka manolotra fa mety tsy maniry ny hanavao ny ao anatiny ianao. Mila manombatombana ny vidin'ny fampandrosoana ianao amin'ny vidin'ny serivisy mailaka. Raha ny hevitro manokana, rehefa manomboka mandefa mailaka ana hetsiny isam-bolana ianao dia mety te hijery ny famolavolana ny vahaolana manokana.
Speed - Raha mandefa mailaka an-tapitrisany isan'andro ianao, mampivelatra ny fotodrafitrasa ataon'ny orinasa toy izany Salesforce ExactTarget angamba tsy hisy dikany mihitsy. Afaka mamono mailaka amina miliara izy ireo nefa tsy mipy maso fotsiny.
Expertise - Raha tsy manana mpiasa mahay ianao na mila tanana be loatra amin'ny alàlan'ny famoronana sy fanatanterahana ny paikadim-barotra amin'ny mailakao dia tsy te-hanangana vahaolana manokana ianao. Mety te hiara-miasa amin'ny orinasa lehibe toa anao ianao Delivra izay manome serivisy ho an'ny mpanjifa mahafinaritra.
Fitantanana Bounce - Ny fanaterana mailaka dia tsy mora toy ny mandefa mailaka. Misy am-polony antony mahatonga ny mailaka hitsangana ary tsy maintsy manangana sy mitantana dingana iray ianao amin'ny fanapahana hevitra raha handefa indray ny mailaka ianao na hanafoana ny mailaka ny mpandray mailaka.
Fanarahana ara-dalàna ny SPAM - Misy lalàna samihafa manerantany izay mifehy ny fampiasana mailaka ho fangatahana varotra. Ny fiantohana ny fanarahanao dia afaka mamonjy aretin'andoha be dia be anao.
Design - Mila efa vita mialoha ve ianao manaiky mailaka modely sa endrika? Sa mila famolavolana drag sy drop? Sa mila votoaty mandroso sy fampidirana fanaingoana ao amin'ny mailakao? Azonao atao ny manome antoka fa manana ny fitaovana sy ny fahaizanao ilainao manokana ny ESP ary mandefa mailaka araka ny tokony ho izy.
Fitantanana ny Subscriber - ny safidin'ny atiny, ny endrika fisoratana anarana ary ny ivon-toerana tsy misy famandrihana dia lakilen'ny fahazoana sy fanaovana personalization ny mailaka ho an'ireo mpamandrika.
API - Te-hitantana mpamandrika, lisitra, contnet ary fampielezan-kevitra ivelan'ny ESP ve ianao? Matanjaka API dia manakiana.
Fampidirana ny antoko fahatelo - Angamba tadiavinao ny fampidirana ivelan'ny talantalana amin'ny rafitra fitantanana atiny (CircuPress dia manana izany amin'ny WordPress), sehatra fitantanana fifandraisana amin'ny mpanjifa, sehatra E-Commerce na rafitra hafa.
tatitra - tahan'ny click-through, A / B fitiliana, fihazonana lisitra, fanaraha-maso ny fanovana, ary tatitra matanjaka hafa izay mitatitra feno metatra mailaka dia hanampy anao amin'ny fampitomboana ny sandan'ny programa marketing mailaka anao. Aza hadino ny mamakafaka sy mampitaha ireo fiasa ao amin'ny ESP tsirairay.
Ary mazava ho azy, ny vidiny no ilaina! Tsy mahita fahasamihafana lehibe eo amin'ny endri-javatra misy eo amin'ireo mpamatsy serivisy mailaka be indrindra eny an-tsena raha oharina amin'ireo ESP kely kokoa izahay. Raha azonao atao ny manenjana ireo fiasa etsy ambony izay manakiana ny fikambanananao, dia heveriko fa misy dikany ny fiantsenana amin'ny vidiny. Ary raha mandefa mailaka an-tapitrisany ianao, dia mety hisy dikany mihitsy aza ny hiaraka amin'ny antoko fahatelo toa azy Sendgrid, na koa manangana rafitranao manokana.
Tags: 250okCan-amin'ny spamkofehymailaka apifitantanana ny mailaka mailakafamolavolana mailakafahaizana mailakainfographic mailakafampidirana mailakamailaka fandefasana mailakaserivisy mailakampamatsy tolotra mailakafanarahana ny spam amin'ny mailakafitantanana ny mailakamailakaESPny fomba hisafidiananalalàna spamfitantanana ny mpanjifa
Mitandrema rehefa mampitaha paoma amin'ny hazon'ny paoma